Abavelisi kunye nababoneleli be-Drawer yeeTyhula abavelisi kunye nabathengisi - China Isitshixo soLuhlu lweZilayidi zeFektri
Ulwandiso olupheleleyo oluHambelanayo oluHambayo oluValiweyo oluValiweyo lweSitraki esinee-3D zangaphambili
Ulwandiso olupheleleyo oluhambelanayo oluhamba ngokuvala imbaleki efihliweyo kunye ne-3D ngaphambili kwizibiyeli zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi usebenzisa izikrufu ezinokuhlengahlengiswa kunye neeplagi zeplastiki ezilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR33BS
Ulwandiso olulodwa oluValiweyo oluValiweyo lokuThoba iSlide yeSilayidi ngeZikrufu eziQhelekileyo kunye neeplagi
Intshayelelo:Ulwandiso olunye oluValiweyo oluValiweyo lokuThoba iSlide yeSilayidi esineeScrew eziguqukayo kunye neeplagi zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi usebenzisa izikrufu ezinokuhlengahlengiswa kunye neeplagi zeplastiki ezilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR23A
Ulwandiso olunye oluValiweyo oluValiweyo lokuThoba iSlide yeSilayidi kunye nezihlanganisi zangaphambili
Intshayelelo:Ulwandiso olulodwa oluValiweyo oluValiweyo lokuThoba iSlide yeSilayidi kunye neziQhagamsheli zangaphambili zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi usebenzisa izikrufu ezinokuhlengahlengiswa kunye neeplagi zeplastiki ezilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR23B
Ulwandiso olunye Push-open open Undermount Drawer Slide with Adjustable Screw
Intshayelelo: Ulwandiso olunye oluVulekileyo lwePush evulekileyo yokuThoba iSilayidi esineeScrews ezinokuLungelelaniswa zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi usebenzisa izikrufu ezinokuhlengahlengiswa kunye neeplagi zeplastiki ezilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR23C
Ulwandiso olupheleleyo lweSoft-Vala ukuThoba iSilayidi seKhabhathi yeeKhabhathi ezingenamthungo- ibhodi yeedrowa eyi-16mm
Intshayelelo:Ukongezwa okupheleleyo okuvaliweyo okusondeleyo kwe-slide ye-drawer yeekhabhinethi ezingenanto-ibhodi ye-16mm idrowa ihlala isetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi usebenzisa izikrufu ezinokuhlengahlengiswa kunye neeplagi zeplastiki ezilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR33A16
Isoft ethambileyo ifihliwe iimbaleki zeedrowa ezongezelelweyo-ibhodi yecala ye-18mm
Intshayelelo:Isoft ethanjisiweyo efihliweyo yeembaleki zeedrowa ezongezwe ngokupheleleyo- ibhodi esecaleni yeerowa ye-18mm ihlala isetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi usebenzisa izikrufu ezinokuhlengahlengiswa kunye neeplagi zeplastiki ezilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR33A18
Ukuthula okuvaliweyo okusondeleyo kwehlisa ityesi efihliweyo yolwandiso olupheleleyo kunye neeklip zangaphambili
Intshayelelo:Ukuthula okuvaliweyo okusondeleyo ukujongela phantsi isilayidi esifihliweyo ulwandiso olupheleleyo kunye neeklip zangaphambili zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi usebenzisa izikrufu ezinokuhlengahlengiswa kunye neeplagi zeplastiki ezilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR33B16
Ulwandiso olupheleleyo lwentaba yentaba esondeleyo yesilayidi esinezixhobo zokutshixa
Intshayelelo:Ulwandiso olupheleleyo lwentaba ezantsi ezisondeleyo zedreyidi enesixhobo sokutshixa zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi ukusetyenziswa kwesilayidi sokutshixa iklip yesixhobo kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR33B
Ulwandiso olupheleleyo lokuvula phantsi kwezilayidi zedreyini yentaba enezikhonkwane ezinokuhlengahlengiswa
Intshayelelo:Ulwandiso olupheleleyo lokuvula phantsi kwezilayidi zedreyini enezikhonkwane ezinokuhlengahlengiswa zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi usebenzisa izikrufu ezinokuhlengahlengiswa kunye neeplagi zeplastiki ezilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR33C
Ulwandiso olupheleleyo lweCala eliPhezulu eliCwangcisiweyo lokuVala kweSilayidi seBhasikidi
Intshayelelo:Isilayidi esigcweleyo esinyusiweyo seSoft Slide esivaliweyo seSlide esetyenziswa rhoqo ekhitshini nakwiikhabhathi zangasese. Olu hlobo lwesilayidi sokusebenzisa isilayidi sokusetyenziswa ukulungisa idrowa yebhasikiti. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR33S